Cabanga main izizathu izandla athuthumelayo. Kukhona izikhathi lapho ziqala bathuthumele futhi babe unmanageable. kungaba eziningi Izizathu. Iningi lazo akuzona eziyingozi, futhi aphile nalo, yebo, kungenzeka. Nokho kukhona eziningi izifo, ngenxa okuyinto umuntu ukuxhawulana. Ngenxa izizathu lokhu mkhuba kumele kucaciswe udokotela. Yenza kubo kubaluleke kakhulu ukuqhubeka ukugwema ingozi ukuze ukuphila nempilo. Ake sizame ukuqonda yiziphi izizathu ngokuvamile nezandla ezitatazelayo kungase kudingeke ukuthi ukwelashwa?
Namuhla-ke kuyinkinga lalivamile ibhekane naso, hhayi kuphela abantu asebekhulile. Hand Shake eletha eziningi eziningi kabi.
Kungani nyakazisa izandla: Ubangela, Ukwelashwa
Lesi simo singaba kakhulu nomkhawulo umsebenzi ngisho ngempela abavamile. Ngokwesibonelo, isiguli kunzima ukubhala noma udwebe, futhi ezimweni ezingavamile futhi ulethe spoon emlonyeni wakhe. Lokhu ngokuvamile uphawu izifo esiwohlozayo ezifana Parkinson, noma kungase kubonise nokulimala engqondweni. Ngemva kokuzwa kahle ukuthi uphethwe, kubalulekile ukuqala ukwelashwa ngokushesha. Kwenzeka ukuthi kubangelwa ukuxhawulana iyona ongaphakeme ezingeni likashukela egazini noma ukungabi carbohydrate. Ukuletha umzimba esimweni ngangokunokwenzeka, uma isikhathi esithile ukuze unciphise ekudleni kwakho. Ezinye kashukela futhi ungawela kakhulu ngemuva ukwethuka noma ukulimala. Into yokuqala ongayenza ukuze uthole oyifunayo ezingeni evamile, ukudla, ezifana banana. Yini enye esingayenza ukuletha umuntu esimweni esinjalo? Izizathu nezandla ezitatazelayo kungenziwa ixhunyiwe, Okwasimangaza nokusetshenziswa njalo yekhofi. Ngenxa caffeine kuyinto ivuselela futhi kubangela ukukhululwa kwe-adrenaline, semali ke emzimbeni kungaholela esimweni excitability anda, okwenza umzimba wonke ngokoqobo shaking. Isizathu esifanayo itholakala evamile ukuxabana, nakho futhi mhlawumbe zokwesaba kanye nokwesaba. Konke lokhu kungaba kuvuse kukhululwe umthamo ukulayisha kwe-adrenaline. Ezimweni ezinjalo, udinga nje zama ngokushesha ukuzola bese uvula ngemicabango emihle. Ngaphezu kwalokho, abaningi banaso lesi sifo, okuthiwa dystonia semithambo. Omunye zako kungaba futhi ethuthumela nasemilenzeni. Yini engenziwa kuleso simo njengoba ukwelashwa okuphumelelayo ngemva kakade babe imbangela nezandla ezitatazelayo laziwe?
umzimba ukusebenza futhi elula
Omunye izivivinyo kakhulu elula - ke kuwumsebenzi onzima massaging amaphuzu athile izindololwane kokubili izingalo. Kufanele futhi afeze massage ngasesinqeni se iminwe imizuzu emithathu kuya kwemine. Ngaphezu kwalokho, kukhona omunye umsebenzi ngaphezulu, kulula, kodwa akukho ayisasebenzi. Udinga ukufaka izandla zombili bazigcobe nobabili uze uzizwe ukubukeka imfudumalo emnandi. Khuthalela massaging Inkomba iminwe ezandleni zombili - futhi eyodwa yezindlela eziphumelela kakhulu. Ambalwa nje zalezi umzimba elula uma yenziwa njalo, kungasiza ekulweni ngokuthuthumela izandla.
Yini odinga ukukwazi mayelana nenkampani UNIM?
Yokubhaka Georgian: okungcono zokupheka
Amanzi ashisayo Isitoreji futhi leso sikhathi: ukukhetha okungcono